Yintoni Einstein Ekholelwa Ngayo Ngokungafi naBomi Emva kokufa?
Iinkolelo zonqulo zihlala zifuna ukuba unqulo lwabo nonqulo lwabo luyimfuneko ekuziphatheni. Kodwa oko kubonakala kungabonakali, nangona kunjalo, kukuba iimeko zokuziphatha ezikhuthazwa ngumthonyama, inkolo yobukhohlakali iyonakalisa ukuba yiyiphi imilinganiselo yokuziphatha. Ukuziphatha kwezenkolo , njengaleyo ebuKristwini, kufundisa abantu ukuba bahle ngenxa yomvuzo ezulwini baze bagweme isijeziso esihogweni .
Inkqubo enjalo yomvuzo kunye nesohlwayo inokubangela ukuba abantu baninzi ngakumbi, kodwa bengabonakali ngakumbi.
U-Albert Einstein waqaphela oko kwaye wayethetha ngokuphindaphindiweyo ukuba ukufumana umvuzo ezulwini okanye isijeziso esihogweni kwakungekho ndlela yokwenza isiseko sokuziphatha. Waye waxela ukuba kwakungeyona isiseko esifanelekileyo senkolo "yokwenyaniso":
Ukuba abantu bahle kuphela ngenxa yokuba besoyika isohlwayo, kunye nethemba lokufumana umvuzo, ngoko ke siyixolongo ngokwenene. Ukuqhubela phambili kokomoya kwindalo yabantu kuqhubela phambili, ngokuqinisekileyo kubonakala kum ukuba indlela yokwenyaniso inkolo ayikho ukuloyiko lobomi, kunye nokwesaba ukufa, kunye nokholo oluyimfama, kodwa ngokuzama ukulandela ulwazi olunengqiqo.
Ukuphila kwam ngonaphakade? Kukho iintlobo ezimbini. Ubomi bokuqala kwiingcamango zabantu, kwaye ngoko ke kukukhohlisa. Kukho ukungafi okuhlobene nokugcina imemori yomntu kwizizukulwana ezithile. Kodwa kukho ukuphela kokungafi okwenyaniso, kwinqanaba le-cosmic, kwaye kungukungafi kwendalo. Akukho nanye.
catshulwe kuyo: Yonke Imibuzo Owake Wathanda Ukuyibuza Ama-American atheists , ngoMadalyn Murray O'Hair
Abantu banethemba lokungafi ezulwini, kodwa olu hlobo lithemba lwenza baqiniseke ukubola kokuziphatha kwabo kwemvelo. Kunokuba bafune umvuzo emva kokufa kwabo bonke imisebenzi yabo emihle, bafanele bagxininise kuzo ezo zenzo ngokwabo. Abantu bafanele balwele ulwazi kunye nokuqonda, kungekhona emva kokufa okungekho nto ekhoyo.
Ukungapheli kwamanye emva kokufa kuyinto ebalulekileyo yeenkolo ezininzi kunye neenkolo zonqulo. Ubuxoki bale nkolelo bunceda ukubonisa ukuba ezi zinkolo kufuneka zibuxoki. Ukugqithisa kakhulu indlela umntu oza kuchitha ngayo emva kokufa kukuvimbela abantu ukuba bachithe ixesha elaneleyo ukwenza ubomi bube bukhulu kakhulu kubo nabanye.
Amazwi kaAlbert Einstein malunga 'nenkolo yokwenyaniso' kufuneka iqondwe kwiinkcalelo zakhe malunga nenkolo. I-Einstein ayiphutha xa sibheka nje inkolo njengoko ikhona kwimbali yabantu - akukho nto "inkohliso" ngokuphathelele inkolo equka ukwesaba ubomi kunye nokwesaba ukufa. Ngokuchasene noko, baye bahlala bekhona kunye neyona nto ibalulekileyo yonqulo kwimbali yabantu.
U-Einstein, nangona kunjalo, waphatha unqulo ngakumbi njengento yokuhlonela imfihlelo yezulu kunye nokufuna ukuqonda into encinane esinokuyenza ngayo. Ngoko u-Einstein, ngoko, ukuphishekela inzululwazi yemvelo kwakukho "intsingiselo" yenkolo - engekho inkolo kwimveli yendabuko, kodwa ingakumbi kwizinto ezingabonakaliyo kunye neengcamango. Wayenqwenela ukubona iinkonzo zenkcubeko zishiya iinkolelo zawo zakudala kwaye ziqhubela phambili kwiindawo zakhe, kodwa kubonakala ngathi akunakwenzeka ukuba oku kuza kwenzeka.
Ukungcola kwamanzi: Izizathu, iimpembelelo, kunye neziSombululo